Na mkpụrụ | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Na mkpụrụ
Kedu ka mkpụrụ osisi pine si baa uru?
Onye ọ bụla maara banyere uru nke mkpụrụ osisi mịrị amị na mkpụrụ. Ma, ọbụna n'etiti ndị dị otú ahụ blanks bụ ngwaahịa ndị kasị baa uru, nke a na-ejikọta n'ụzọ nkịtị na vitamin na ogige ndị bara uru. Banyere otu n'ime mkpụrụ ndị a, a ga-atụlekwa ya na nyocha anyị. Anyị na-amụtakwu banyere mkpụrụ osisi pine, uru ha na-emerụ ahụ. Ihe odide caloric na ihe ndị mejupụtara chemical. A na-ewere mkpụrụ ndị a dị ka ngwaahịa calorie dị elu - na 100 g nke owuwe ihe ubi ọhụrụ 673 kcal dị.
Otu esi ehicha anu aki
N'ikpeazụ, ndị na-arụ ọrụ n'oge a na-eji ihe ndị dị egwu na ọbụna ihe ndị dị na nri, na ọ bụrụgodị na ijughị onye ọ bụla nọ na tebụl ahụ na painịpia, a ka nwere ike ikwu na ọ bụ ihe ịtụnanya. N'agbanyeghị eziokwu ahụ bụ na a pụrụ ịchọta nnukwu mkpụrụ ndị a n'ahịa n'efu, ọ bụghị ndị niile na-azụ ahịa maara otú e si họrọ ma meghee ha n'ụzọ ziri ezi, na e nwere ọtụtụ ụzọ.
Oko oyibo: ole calorie ole, ihe bara uru, otu esi ahọrọ na imeghe, na ihe ejikọtara
Oke oyi bu nri nke ebe ndi ozo, nke a ma ama maka ihe ndi ozo, uto na uru di iche iche maka aru dum. Mkpụrụ a, nke na-eto n'osimiri oké osimiri dị ọkụ, na-eji ya eme ihe n'ọtụtụ ebe nke ọrụ mmadụ - anyị ga-atụle atụmatụ ya na isiokwu a.